(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 26/02/2021)
Ukuba une iiveki ezimbini ukuya chitha Spain, enye yeendlela eziphambili ukuhambahamba ukuba ukuhlola Spain ngu Train. akayi kuphela oku kukuvumela ukuba ubone ezinye izinto ezimangalisa kwilizwe, kodwa umdla Uloliwe e Spain kakuhle kakhulu kwaye kulula. Enzima kakhulu ukuba uthenga le amatikiti etreyini. Eyona ndlela ibhetele uzithengela amatikiti etreyini ukuya eSpain ngololiwe online. Kukho iiwebhusayithi ezininzi ezikuvumela ukuba wenze oku. Undoqo ukufumana umntu osebenza kakuhle kuwe ngokwemigaqo usebenziso olulula, ulwimi, kunye nohlahlo. Ukuthenga amatikiti bakho ikuvumela ukuba uthathe inzuzo iirhafu kunokwenzeka ezizodwa kunye nokuqiniseka ukuba ziyamkele koololiwe ofuna phambi kokuba babe ulihlawulele ngokupheleleyo.
Cwangcisa kwangaphambili kwaye u-odole amatikiti akho kwangaphambili ukuze ufumane okungcono ngaphandle kwe yokuhamba yakho uloliwe. Thatha ujongo kwi le weeveki ezimbini-hambo ngokuba ojikelezayo Spain ngu Train. Makube oku kuba sisikhokelo for uhambo lwakho elandelayo.
Le likomkhulu Spanish kwaye umxube elungileyo zombini amatsha kunye namadala kunye, kunye neepaki eziphambili, shopping Amazing, vibey yasebusuku kwaye kunjalo i-Malasana ariya. Madrid naye ekhaya abaliqela waseSpeyin iimyuziyam eziphezulu. Mininzi imisebenzi yendlu eyaziwa kumazwe ngamazwe. Ngenxa yokuba kukho into eninzi yokwenza kwesi sixeko ukuze yakho 3 iintsuku apha uya kuba kakuhle elisetyenziswayo. Kuyinto isiqalo elungileyo uhambo lwakho kwiveki ezimbini yaye Kulula ukuba uloliwe ukuya naphi na apha. IMadrid Atocha sisikhululo sikaloliwe esifumana kuso inkampani kaloliwe esemthethweni, kananjalo esi sikhululo sikaloliwe sesinye sezona zintle kwizikhululo zikaloliwe ku Spain.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fspain-by-train%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
oololiwe train Travel indawo yokuhamba